Jidka Soomaaliya – Abschir Hassan Foundation
Soomaaliya, waa sida aad u adag tahay film, maadaama ay dadku aad u shaki badan yihiin. In badan ayaa ka baqaya in ay la scounto. Cabsi ma ahan mid aan la aqbali karin, marqaati ka ah Weerarka argagixisada ah ee Soomaaliya had iyo jeer waa in ay ku xambaaraan sanado badan. gaar ahaan caasimada muqdisho ayaa saameysay.
Sidaas ayaan u tooganay muuqaalkaan yar oo gaariga lagu daboolo. Dabcan waxaan weydiisaneynaa in aan raali galino!
Halkan waxaad ka heli kartaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Soomaaliya iyo xaaladda ammaanka hadda:
Waxaan ognahay in ay tahay halis lagu joojiyo Soomaaliya oo xarun lagu dhiso, laakiin caruurtaan iyo dadka yar waxay u baahan yihiin caawinkeena. Yaa kale waa in aan ku caawinaa marka laga reebo mid caadi ah?